Muxuu yahay Qolka dad badan ku badbaadeen ee ‘Al-Shabaab ay gali waayeen’? | Hangool News
Muxuu yahay Qolka dad badan ku badbaadeen ee ‘Al-Shabaab ay gali waayeen’?
August 20, 2020 - Written by Hangool News 1
Hangoolnews:- Maamulka Hoteelka Elite ee magaalada Muqdisho, oo dhawaan la weeraray, ayaa sheegay inay dayactir ku wadaan hoteelka, dibna loo furi doono.
Xildhibaan Cabdullaahi Maxamed Nuur, oo ah milkiilaha hoteelka Elite ayaa sheegay in uu heer gabo gabo ah marayo dadaalka dib u habeynta loogu sameynayo hoteelka uu qaraxa ka dhacay dhowr maalmood ka hor.
“Waan sii wadaynaa howlihii aan wadnay namana niyad jabineeyso dhacdadii lagu beegsaday Hotel-ka elite,” ayuu yidhi Xildhibaan Cabdullaahi.
16-kii bishan ayey koox hubeysan qarax iyo weerar ka fuliyeen hoteelka, halkaasoo ugu yaraan 16 ruux ay ku geeriyoodeen tiro kalena dhaawacyo kasoo gaadheen.
Qolka aysan rasaasta karin
Milkiilaha hoteelka, ayaa BBC-da uga warramay qol la sheegay in uu hoteelka ku yaallo, kaasoo aysan rasaasta karin.
Wuxuu xaqiijiyay arrintaas iyo in isaga iyo dad kale ay ku badbaadeen qolkaas intii uu weerarka socday.
“Waddanka aan ku nool nahay iyo waaqica in la fahmo aad bay muhiim u tahay. Marka wuu jiray ku talagal loo sameeyay qol aysan rasaasta karin, waana meel loogu talagalay dhinaca badbaadada, dad badan ayuuna Alle sabab uga dhigay inay ku badbaadaan. Dhowr iyo labaatan qof baan ahayn dadkii ku jiray”, ayuu yidhi.
Cidamada sida gaarka u tababaran ee Soomaaliya ayaa ku guuleystay inay weerarkaas soo afjaraan. dadka dhintay ayaa la sheegay in 5 ka mid ah ay ahaayeen kooxdii weerarka fulisay.
Sii hayaha Ra’iisul Wasaaraha dalka, mudane Mahdi M. Gulaid, oo kulan la qaatay laamaha amniga dalka ayaa faray inay baaritaan saxan oo dhammeystiran ku sameeyaan dhacdadii weerarka hoteelka, waxa uuna sidoo kale ku adkeeyay in ay laba jibaaraan dadaallada lagu xoojinayo amniga dalka si ummadda Soomaaliyeed ay u helaan amni la isku halleyn karo.